Sidee Margin Trading (LEVA) loogu sameeyaa Binance? - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Sidee Margin Trading (LEVA) loogu sameeyaa Binance?
Tag: Binance, lever, Ganacsi ganacsi
Waa maxay ganacsiga margin, maxay macnaheedu tahay in lagu sameeyo ganacsiga margin ee Binance? Ugu horreyntii waxaad u baahan tahay inaad furto faylalka ganacsiga ee margin meesha aad aadeyso, si sax ah, margin, iyo sidoo kale waa inaad tagtaa deyn qaado per ku shaqee lever, in la dheeraado ama in la gaabiyo, ka dibna la iibsado maxaa yeelay waxaan ku qanacsanahay in qiimaha uu kor u kici doono, ama in la iibiyo maxaa yeelay waxaan ku qanacsanahay inuu hoos u dhici doono.
Qodobka ugu horeeya: qofna ma doonayo deyn, farsamadan ayaa kugu qasbeysa inaad qaadato amaah aad ku bixin doonto dulsaar.
Qodobka labaad: heerka halistu aad iyo aad ayey u sarreeysaa. Waxaan u qoraa qoraalladan si aan u xusuusto tallaabooyinka iyo farsamada, laakiin ganacsatada khibradda leh oo keliya waa inay adeegsadaan hawlgalka noocan ah.
Maqaalka xigtaBinance Coin (BNB): Astaamaha asalka u ah isweydaarsiga ugu weyn adduunka ee 'crypto'